Danger Close (2019) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
စဈအငျအား၊လကျနကျအငျအား အဘကျဘကျက သာလှနျနတေဲ့ သူတှကေို ဗီယကျနမျတှဟော လုံးဝမကွောကျရှံခဲ့ဘူး….ဘယျသူမှမယှဉျနိုငျတဲ့ပွောကျကြားစဈဗြူဟာ ပွနျလညျတုံပွနျခမြှေုနျးခဲ့တာ အားလုံးလညျးသိပွီးဖွဈမှာပါ…. အခုလညျး Australian နဲ့ New Zealand တပျတှရေဲ့ ကွီးမားတဲ့စဈအခွစေိုကျစခနျးကို ဗီယကျနမျတှကေ တညျနရောအတိအကရြယူပွီး လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ဗုံးသီးမိုးရှာခဲ့တယျ… အကအြဆုံးမြားခဲ့သလို New Zealand တှအေတှကျလညျး အခဲမကခြေဲ့ဘူး… ဒါကွောငျ့ တနျပွနျတိုကျစဈဆငျဖို့ ရနျသူ့တညျနရောကို အမွနျဆုံးရှာဖှပွေီး လိုကျလံသုတျသငျဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ…. အဲ့ဒီမှာ ပွောကျကြားစဈပိုငျတဲ့ ဗီယကျနမျတို့အကွိုကျဖွဈသှားတော့တယျ…. သူတို့ ဘယျလို တနျပွနျတိုကျစဈဆငျကွမလဲ… ပဈကူတှဘေယျလိုယူလဲ… ဗီယကျနမျတှရေော ဘယျလို ပွောကျကြားစဈဆငျနှဲမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး…IMDb…7.4 တောငျရရှိထားပါတယျ… ဒီ စဈကားက စစခငျြးကို တအုနျးအုနျးနဲ့ဗငျြးကွတာပါ…အီနတောကိုမရှိသလောကျပါပဲ…. စဈကားကွိုကျသူတို့အဖို့တော့ လကျမလှတျသငျ့ပါကွောငျး သတငျးကောငျးပါးအပျပါတယျ
ဒီကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Htet Thuya Aung ဖွဈပါတယျ
စစ်အင်အား၊လက်နက်အင်အား အဘက်ဘက်က သာလွန်နေတဲ့ သူတွေကို ဗီယက်နမ်တွေဟာ လုံးဝမကြောက်ရွှံခဲ့ဘူး….ဘယ်သူမှမယှဉ်နိုင်တဲ့ပြောက်ကျားစစ်ဗျူဟာ ပြန်လည်တုံပြန်ချေမှုန်းခဲ့တာ အားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ…. အခုလည်း Australian နဲ့ New Zealand တပ်တွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်းကို ဗီယက်နမ်တွေက တည်နေရာအတိအကျရယူပြီး လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ဗုံးသီးမိုးရွာခဲ့တယ်… အကျအဆုံးများခဲ့သလို New Zealand တွေအတွက်လည်း အခဲမကျေခဲ့ဘူး… ဒါကြောင့် တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ဖို့ ရန်သူ့တည်နေရာကို အမြန်ဆုံးရှာဖွေပြီး လိုက်လံသုတ်သင်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်…. အဲ့ဒီမှာ ပြောက်ကျားစစ်ပိုင်တဲ့ ဗီယက်နမ်တို့အကြိုက်ဖြစ်သွားတော့တယ်…. သူတို့ ဘယ်လို တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ကြမလဲ… ပစ်ကူတွေဘယ်လိုယူလဲ… ဗီယက်နမ်တွေရော ဘယ်လို ပြောက်ကျားစစ်ဆင်နွှဲမလဲဆိုတာကိုတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…IMDb…7.4 တောင်ရရှိထားပါတယ်… ဒီ စစ်ကားက စစချင်းကို တအုန်းအုန်းနဲ့ဗျင်းကြတာပါ…အီနေတာကိုမရှိသလောက်ပါပဲ…. စစ်ကားကြိုက်သူတို့အဖို့တော့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်
ဒီကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Htet Thuya Aung ဖြစ်ပါတယ်
Option 1 storage.msubmovie.com 533 MB SD (480p)
Option2megaup.net 533 MB SD (480p)
Option3uptomega.com 533 MB SD (480p)
Option4datbu.com 533 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 533 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 533 MB SD (480p)
Option 12 storage.msubmovie.com 5.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 13 sharer.pw 5.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 yuudrive.me 5.1 GB FHD DTS-HDMA 5.1